DMG ဖိုင်များ၊ သူတို့ဘယ်လိုဖွင့်သလဲ။ အဲဒါတွေကဘာလဲ? | ငါက Mac ပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Windows မှ Mac သို့ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်၊ ပထမအပတ်များအတွင်း၊ သင် interface ပြောင်းလဲမှုကြောင့်သာမက၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကြောင့်လည်းအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ကွန်ပျူတာများနှင့်လက်တော့ပ်များအတွက်အက်ပဲလ်လည်ပတ်မှုစနစ်။ အများဆုံးအာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသောအဓိကအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ် executable ဖိုင်များမရှိခြင်း၊ ပုံမှန် .exe ဖိုင်များမရှိခြင်း
Mac တွင် DMG အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီ format နဲ့ဖိုင်များဖြစ်ကြသည် ကွန်တိန်နာဖိုလ်ဒါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ install လုပ်ချင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။ Mac App Store တွင်မရရှိနိုင်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ် application များကိုသင်မရှာပါက၎င်းအမျိုးအစားဖိုင်နှင့်သင်အဆုံးသတ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
1 DMG ဖိုင်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
2 DMG ဖိုင်များကိုဖွင့်နည်း
2.1 အထဲမှာပါသောအကြောင်းအရာ install လုပ်ဖို့
2.2 အကြောင်းအရာကို drive တစ်ခုသို့ပြန်ယူပါ
3 DMG ပုံစံဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်အဘယ် application ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သနည်း
4 DMG ဖိုင်မဖွင့်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ
5 DMG ဖိုင်ကို EXE သို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
6 Windows တွင် DMG ဖိုင်များကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
6.2 DMG ထုတ်ယူသူ
7 DMG ဖိုင်များကို Linux တွင်မည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
DMG ဖိုင်များသည် ၀ င်းဒိုးရှိ ISO format ရှိဖိုင်များနှင့်တူညီသည်။ ၄ င်းတို့ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ယူနစ်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာဖိုင်ကိုတပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်ဖိုင်တွဲသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရယူရမည့်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ။ ဤဖိုင်အမျိုးအစားသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအစီအစဉ်ကိုခံစားခွင့်ပြုသည့်ဖိုင်အပြင်အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်ပါသောစာသားစာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်သည် ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်တဲ့အပေါ်ညွှန်ကြားချက်။
DMG ဖိုင်များသည် Windows ရှိ ISOs နှင့်တူညီသည်။ ISO format ရှိဖိုင်များကသူတို့၏အတွင်းပိုင်းကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး CD သို့မဟုတ် DVD သို့ကူးယူရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကဘဲ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာ install သို့မဟုတ်ကူးယူရန်ခွင့်ပြုပါ။ DMG အမျိုးအစားရှိဖိုင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏လေးပုံသုံးပုံသည်ဖြစ်ပျက်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဖိုင်ကိုယ်တိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ unzip လုပ်ခြင်း၊ အချိန်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်တစ်ခုတွင်ကူးယူရမည့်မတူညီသောဖိုင်များပါ ၀ င်သည့် disk image တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် ပြင်ပ drive ပေါ်တွင်။
အထဲမှာပါသောအကြောင်းအရာ install လုပ်ဖို့
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် DMG format ဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းလက်တွေ့တွင်မူဘာမှမကျန်တော့ပါ။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်း၌ရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအခါမှသာကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုတဲ့ drive ထဲကိုဝင်ပြီးဖိုင်ကို run ပါ ထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် run ရန်။
၎င်းဖိုင်အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အပလီကေးရှင်းသည်သာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် .DMG ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖျက်သိမ်းပါက ကျနော်တို့လျှောက်လွှာကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေများတွင်၎င်းသည် executable application တစ်ခုဖြစ်ပါကဖိုင်ကို application များထဲသို့ဆွဲယူရမည်။
အကြောင်းအရာကို drive တစ်ခုသို့ပြန်ယူပါ
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည်ယူနစ်မိတ္တူပါသောရုပ်ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေတာကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ပါကဖိုင်၏အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မည်သည့်ကောင်းကျိုးမှမဖြစ်စေပါ။ လျှောက်လွှာ၏အသုံးပြုမှုကို။ ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှ Disk Utility ကိုအသုံးပြုရမည် ကျနော်တို့ပြန်ယူချင်သော DMG format နဲ့ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကိုရွေးပြီးယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပါ ငါတို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူလုပ်ချင်တဲ့နေရာ။
DMG ပုံစံဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်အဘယ် application ကိုကျွန်ုပ်လိုအပ်သနည်း
Windows တွင်ရှိသကဲ့သို့သင်သည် ISO format ဖြင့်ဖိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်တတိယပါတီ application ကိုမလိုအပ်ပါ။ Mac ၌ DMB format ဖြင့်ဖိုင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်မည်သည့် application ကိုမလိုအပ်ပါ။ မဟုတ်လျှင်တကယ်လိုအပ်သောမဟုတ်ပါဘူး အခြားဖိုင်များပေါ်တွင်ဤဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖိအားပေးခံရသည် PeaZip application သည်အကောင်းဆုံးထောက်ခံချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Windows သို့မဟုတ် Linux ကဲ့သို့လုံးဝလွတ်လပ်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
MacOS Sierra စတင်ပြီးကတည်းက Apple သည်ယခင်က Apple မှဖော်ထုတ်ခဲ့သော developer များတီထွင်ခဲ့သည့် third-party application များကိုတပ်ဆင်ရန်စွမ်းရည်ကိုမူလကဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်လိုသော application ပါ ၀ င်သော DMG ဖိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှားပြသခြင်းကိုပြပါကဖိုင်သည်အကျင့်ပျက်ပြားနေကြောင်းဖော်ပြပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Terminal ရှိအောက်ပါလိုင်းကို ဝင်၍ third-party application များကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။
sudo spctl –master-disable လုပ်ပါ
မျက်လုံး! ရှေ့မျက်နှာစာမှာ dash နှစ်ခု (- -) ပြီးရင် Finder ကိုအောက်ပါ command နဲ့ restart လုပ်ရပါမယ်။ Killall Finder
ထို command ကိုထည့်ပြီးသောအခါ System Preferences အတွင်းနှင့် Allow applications များမှတည်ရှိသော Security and privacy section သို့ပြန်သွားပါမည်။ select: ဘယ်နေရာမဆို
DMG ဖိုင်ကို EXE သို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း DMG ဖိုင်သည် application များစွာပါ ၀ င်သောဖိုင်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်သောအခါယူနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Mac ပေါ်တွင် executable file တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ DMG ဖိုင်ကို EXE သို့ပြောင်းလို့မရပါ။ DMG ဖိုင်ကို executable file တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဓာတ်ပုံများ (ဥပမာအားဖြင့်) ဖိုင်တွဲတစ်ခုအား executable file တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တူသည်။
Windows တွင် DMG ဖိုင်များကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
DMG ဖိုင်တွင် PC ရှိသိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်လိုပါက Windows တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည် ဖိုင်ကို၎င်း၏အကြောင်းအရာများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသော application အမျိုးမျိုး။ နောက်ပြissueနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများဖြင့်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းအတွက်စျေးကွက်တွင်လက်ရှိတွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး application များမှာ PeaZip, 7-Zip နှင့် DMG Extractor ဖြစ်သည်။
compressed files နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုမှာ PeaZip ဖြစ်သည်။ DMG, ISO, TAR, ARC, LHA, UDF အပြင်စျေးကွက်ရှိအသုံးအများဆုံး formats အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်သည်အလိုလိုသိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Windows PC မှ DMG ဖိုင်များကို unzip လုပ်ရန်ဤလျှောက်လွှာကိုမြန်မြန်ကိုင်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြproblemနာမရှိပါ။
PeaZip ကို download လုပ်ပါ
DMG Extractor သည်၎င်း၏အမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည် ဖိုင်များကို DMG ပုံစံဖြင့်ထုတ်ယူပါ လျင်မြန်စွာနဲ့အလွယ်တကူ။ ဤကိရိယာသည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အချို့သောအချိန်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မူကိုကူးယူနိုင်သည် အောက်ပါလင့်ခ်မှတဆင့် အရွယ်အစား4GB ထက်မပိုသော DMG format ဖြင့်ဖိုင်များကို decompress လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော version တစ်ခု။
7-Zip သည်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို Windows PC တွင်ချုံ့ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့နှင့် macOS DMG ဖိုင်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းပြီးလျှင်ဖိုင်၏ထိပ်တွင်နေရာချရမည်၊ ပါ ၀ င်သောအရာများကိုစတင်ဖြည်ချရန် 7-zip ဖြင့်ညာဖက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ရန်ရွေးပါ။
7-Zip ကို download လုပ်ပါ
DMG ဖိုင်များကို Linux တွင်မည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း
DMG format ဖြင့်ဖိုင်များကို Linux တွင်ဖွင့်လိုပါက PeaZip ကိုထပ်မံအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤဖိုင်အမျိုးအစားသည် Windows ရှိဤဖိုင်အမျိုးအစားများကို decompress ရန်ဖြစ်သည်။ 180 ကျော် format နဲ့သဟဇာတ ထို့အပြင်၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » .Dmg ဖိုင်များ
စန်တီယာဂို estrada ဟုသူကပြောသည်
santiago Estrada အားပြန်ကြားပါ
ပညာရေး, Macs နှင့် Idevices ။ မဟာဗျူဟာမြောက်အပြောင်းအရွေ့တစ်ခု
စတိဗ်ဂျော့၏သမီး Lisa သည်ဖခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးနေသည်